Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo deg deg ugu laabtay Baydhabo - Awdinle Online
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo deg deg ugu laabtay Baydhabo
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed (laftagareen) oo saacado kooban ku sugnaa Magaalada Muqdisho ayaa Maanta dib ugu laabtay Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
Wafdiga ayaa waxaa Garoonka diyaaradaha Shaati Gaduud ee Magaalada Baydhabo waxaa kusoo dhaweeyay Xubno ka tirsan labada Hole ee Maamulka Koonfur Galbeed iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada Magaalada.
Saacadihii uu ku sugnaa Magaalada Muqdisho ayaa Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaa uu kulan kula qaatay ergayga gaarka ah ee Wasiirka arrimaha dibadda Qatar u qaabilsan dhexdhexaadinta iyo la dagaallanka waxa loogu yeero argagixisada Mudane Multaq Alqahtani.
Waxa ay ka wada hadleen xoojinta la dagaallanka argagixisada iyo Arrimaha doorashooyinka dalka, iyaga oo isku afgartay in la joogteeyo wadashaqeynta dowladda Qatar iyo Maamulka Koonfur Galbeed.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waxaa la filayaa in Maalinta Khamiista ah ee todobaadkaan in uu Golihiisa Wasiirada la wadaago waxyaabihii uu kala hadlay ergayga gaarka ah ee Wasiirka arrimaha dibadda Qatar u qaabilsan dhexdhexaadinta iyo la dagaallanka waxa loogu yeero argagixisada Mudane Multaq Alqahtani.
Previous articleCiidanka dowladda Soomaaliya oo howlgal burburin ah sameeyay
Next articleRa’iisul Wasaare Rooble oo Guddi u saaray khalalaasihii ka dhacay Muqdisho